माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठक सुरू | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठक सुरू
April 15, Thu
माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठक सुरू
चैत १ गते, २०७७ - ११:४६
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठक पार्टी केन्द्रिय कार्यलय पेरिसडॅाडामा सुरू भएको छ ।
अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट छुटिट्एका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमध्य केन्द्रको पहिलोपटक केन्द्रिय समिति सुरू भएको हो ।
केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार यो बैठकले पार्टी सुदृढिकरणको खाका कोर्ने छ भने एमालेमा प्रवेश गरेका राम बहादुर थापा बादल सहित २३ जनालाई कारवाही गर्नेछ ।
नेकपा विभाजन भएपछि स्थायी समितिका सदस्यहरु थापा, टोप बहादुर रायमाझि, मणी थापा, लेखराज भट्ट लगायतका २२ केन्द्रिय सदस्य एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । यसअघि स्थायी समितिको बैठकले २४ घण्टाभित्र उनीहरुलाई आफ्नो अवस्था प्रष्ट पार्न भनेको थियो ।
उता एमालेको बैठक बसेर थापा, मणी थापा र लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मा दिइसकेको छ । उनीहरुले पनि माओवादी केन्द्रमा नफर्किने बताईसकेका छन् । उनीहरुमध्य राम बहादुर थापा राष्ट्रियसभा सदस्य छन् भने रायमाझि, भट्ट, गौरिशंखर थारु, प्रभु शाह लगायतका प्रतिनिधिसभाका सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट समेत कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले यसरी कारवाही गर्दा उनीहरुको सबै पद गुम्नेछ भने उक्त स्थानमा पुननिर्बाचन हुने संबैधानिक प्रावधान छ ।
चैत १ गते, २०७७ - ११:४६ मा प्रकाशित
०७८ मा तपाईको भाग्य कस्तो हुनेछ ? हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल
राशि भनेको २७ वटा नक्षत्रहरूको एउटा घेरा अथवा समूह हो जसको माध्यमबाट सूर्यादि नवग्रह सौर्यमण्डलामा...
दोलखामा जीप दुर्घटना, ४ को मृत्यु, १७ घाइते
दोलखा । दोलखामा गएराति सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी...
रियलसँग २–१ ले स्तब्ध बार्सिलोना तेस्रोमा झर्यो
काठमाडौं । गएराति रियलको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोना रियलसँग २–१ ले पराजित भएको छ । पहिलो...
किन बोलाए देउवाले पदाधिकारी बैठक ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । पार्टी कार्यालय...
आज घोडे जात्रा, काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आइतबार घोडे जात्रा मनाइँदै छ । जात्राको अवसरमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा...
पत्रकार महासंघमा ओली समर्थकको लज्जाष्पद पराजय : पोखरेल प्यानल विजयउत्सवमा
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघमा संयुक्त प्यानल पोखरेल प्यानलले विजयउत्सव मनाउन थालेको छ । संयुक्त...
व्यावसायिक पशुपालनमा लाग्न प्रेरणाका स्रोत बने नराल दाजुभाइ
तनहुँ । व्यास नगरपालिका–१३ स्थित पोखरीभञ्ज्याङ निवासी तरुण दल तनहुँका सचिव दयानिधि र पुस्तक व्यवसायी...
भीम रावलको प्रश्न : राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको तक्मामा चुच्चे नक्शा खै ?
काठमाडाैं। नेकपा एमालेमा निलम्बनमा परेका नेता भीम रावलले राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको तक्मामा अंकित...
पौडेलको खुलासा : नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रयत्नमा छौं
तनहुँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रयत्नमा...
३६६ इन्स्पेक्टरको सरुवा, को–कहाँ ?
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३६६ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को सरुवा गरेको छ । शुक्रबार...
नेपालगञ्जका सवै शैक्षिक संस्था एक साता बन्द गर्ने उप–महानगरपालिकाको निर्णय
प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच बालुवाटारमा भेट वार्ता, कार्यदलको बैठक बस्दै
कोरोना उच्च जोखिम रहेको १४ जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन : जघन्य अपराधको घटनामा पहिचान नखुलेका बेवारिसे शवको अभिलेख २० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु
एमसीसीप्रति सरकारको मोह : कानूनमन्त्री भन्छन्, छिट्टै प्रकृया अगाडि बढाइन्छ
विपक्षी दलद्वारा विशेष अधिवेशन बोलाउन गण्डकी प्रदेश प्रमुखसंग माग
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लियो
प्रधानमन्त्रीले वाम गठबन्धन भत्काएर दक्षिणपन्थीसंग मिलेर सरकार टिकाउन खोज्नु गलत : घनश्याम भुसाल
प्रधानमन्त्रीबाट स्वीच थिचेर ‘ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ शुभारम्भ, ‘मेरो कित्ता एप’मार्फत घरमै बसेर नक्सा प्रिन्ट गर्न सकिने
विपक्षी गठबन्धनद्वारा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, नयाँ मुख्मन्त्रीमा कांग्रेसका नेता पोखरेल प्रस्ताव
गण्डकी प्रदेश सभा बैठक बोलाउन समावेदन दिने तयारीमा विपक्षी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन
कसले गर्यो एमाले सांसद रावल बसेको घरमा ढुंगा प्रहार ?
संघीय निजामती विधेयधक प्रति मन्त्रालयकै कर्मचारी आन्दोलनमा
मुख्यमन्त्री गुरुङको चलाखी : आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि चालु अधिवेश नै अन्त्य
अब घरजग्गा नक्सा लिन नापी कार्यलयसम्म धानउन नपर्ने, घरमै बसेर प्रिन्ट गर्न सकिने प्रविधि लागू हुँदै